Jis G3444 - China Five simbi (Tianjin) Tech
Shipping: 20ft, 40ft, hombe mudziyo
Payment Terms: L / C, T / T, yokumadokero mubatanidzwa
Kunze dhayamita (mm): 21.7-1016.0
Wall ukobvu (mm): 2.0-22
Length: 1M-12m kana customized urefu
Pamusoro kurapwa: vatema, kupenda, kwakakurudzira, etc.
Anopedzisa: bani kana Threaded zvose magumo mumwe mugumo epurasitiki chivharo mumwe mugumo coupling
Apex mu tsapo kana akamonera nemvura-uchapupu PVC jira.
Shipping .: hombe kana mutoro mumidziyo.
Payment: T / T, L / C, yokumadokero mubatanidzwa
Mafomu: mamiriro, mvura, gasi uye zvichingodaro.
Table 1. Chemical Kuronga
0.30 kusvikira 1.30
Notes a) Kana zvakakodzera, alloying zvimwe zvinhu pane raanotaura tafura iyi inogona kuwedzerwa. b) Nokuti chubhu ine STK540 giredhi zvikuru 12,5 mm vari parusvingo ukobvu, makemikari anoumba kungava pasi aggreement pakati anotenga uye kambani.
Tensile simba N / mm²
Goho pfungwa chehumbowo kunetseka N / mm²
simba Tensile mu weld mapazi N / mm²
Distance pakati ndiro (H)
Rikashandiswa panze dhayamita
All kunze diameters
CHERECHEDZA 1 D patafura iyi kunze dhayamita pakati sepombi. MASHOKO 2 1 Nmm² = 1MPa
Previous: EN10219Round simbi mutopota
Cold akakungurutsa Round Steel Pipe
kwakakurudzira Round Rakaumbwa Steel Pipe
kwakakurudzira Round Steel Pipe
kwakakurudzira Round Steel Zvikwepa
Pre kwakakurudzira Round Pipe
Pre-kwakakurudzira Steel Round Zvikwepa
Round kwakakurudzira Steel Tube
Round Steel Zvikwepa